Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya ee UK oo sanadka Cusub Banaanbaxyo iyo Wacdaro Muujisay
Jaaliyada Ogadeniya ee UK oo sanadka Cusub Banaanbaxyo iyo Wacdaro Muujisay
Posted by ONA Admin	/ January 12, 2013
Jaaliyada Ogadeniya ee Wadanka UK ayaa banaanbax aad u xoog badan ku qabatay safaarada Gumeysiga Ethiopia ku leedahay London, halkaas oo boqolaal u badan haween iyo dhalinyaro da’yari isugu tageen. Banaanbaxan ayaa lasoo kulmay xilli ay saxaafada wadanka UK aad uga hadlayso lacagaha sida qaldan loo siiyo gumeysiga Ethiopia ee loo adeegsado xasuuqa shacbiga somalida Ogadeniya.
Hadaba Jaaliyada Ogadeniya oo ka jawaabaysa lacagaha deeqda ah ee lasiiyo Gumeysiga Ethiopia ayaa cabashadooda ku muujiyay banaan bax ay kaga hortageen wafdiyo gumeysiga Ethiopia usoo dirsaday wadanka UK si lacagaha deeqdaas ah ay u kororsadaan.
Jaaliyada Ogadeniya ayaa xidhiidho lasameysay saxaafada Wadanka UK iyo Dowlada Wadanka UK iyo waliba haayada si gooni ah arrimahan ay u quseyso. Iyaga oo ka cabanaya lacagta dowlada UK siiso xisbiga woyanaha ee gumeysta shacabka Ogadeniya.
Jaaliyada ayaa diyaarisay waqrado Pitition ah oo la hor geyn doono baarlamaanka UK warqadahaas ayaa illaa hada inta la ogyahay waxaa u badan dadka saxiixay Qowmiyada Caddaanka ee loogu yimid dhulkan Britain kuwaas oo aad uga xun in dowladu ka qeyb noqoto xasuuqa ay Ciidamada gumeysiga iyo kuwa malishiyaadka hawaarintu ka geystaan Ogadniya.
Dowlada boqprtooyadada Britain ayaa laga codsaday inay dibu qiimeyn kusameyso deeqaha ay siiso Ethiopia oo markii hore loogu talo galay in lagu saacido shacbiga somalida Ogadeniya balse Gumeysiga Ethiopia siyaabo qaldan u isticmaalo laguna xasuuqo maati iyo qowmiyad dhan oo laga tirtirayo qariirada Afrika.
Ololahan ay Jaaliyada UK bilowday aya la filaya innuu natiijo dhaliyo meelo korena uu gaadho maalmaha soo socda.